FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA OVTCHARKA AVY ANY AZIA AFOVOANY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Ovtcharka avy any Azia afovoany
Deja Ilay Mpiandry Azia Afovoany— ' Tian'i Deja ny 'miambina' ny faritany amin'ny tranony alika. Azontsika antoka fa tsia saka , voalavo , voalavo , sokina na zavaboary kely kokoa handalo ny faritaniny mandrakizay :) '
Ovtcharka Azia Afovoany
Mpiandry ondry avy any Azia
Sheepdog Aziatika afovoany
Alika mpiandry aziatika afovoany
Ovcharka avy any Azia afovoany
Ny Ovtcharka Aziatika Afovoany (CAS) dia alika goavambe lehibe sy hozatra ary Mastiff. Tsy azo atao ny miantsona amin'ny rambony sy ny sofina, miankina amin'ny firenena onenananao. Ny firenena sasany toa an'i France, Netherlands, Australia, sns, ary maro hafa dia mandrara ny cropping sy ny docking. Tsy misy fijanonana marina manomboka amin'ny handrina ka hatrany amin'ny vava. Somary lava kokoa noho ny hahavony ny vatana. Ny palitao matevina dia misy karazany roa, lava sy fohy. Ny palitao dia misy loko isan-karazany. Ny CAS dia tokony ho henjana amin'ny karazana taolana lehibe, tratra lehibe ary lamosina malalaka. Ireo hozatra volon-doha dia manana hozatra mahery amin'ny soroka. Matevina ny hoditra amin'ny tarehy ary mety mahaforona ketrona. Mahery ny feny. Mahery sy lava ny lamosina.
lab chesapeake bay retriever mix
Milamina sy tsy misy tahotra ny Ovtcharka any Azia Afovoany mpiandry ondry . Mahaleo tena, mijoro amin'ny toerany izy ireo ary tsy mihemotra. Izy ireo dia tsara miaraka amin'ny olona ao amin'ny fianakaviany manokana, na izany aza, tokony arahi-maso miaraka amin'ny ankizy izy ireo. Ivelan'ny trano dia mety manandrana manjaka alika hafa izy ireo ary mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra mpiambina ary hanao zavatra toy izany. Tian'izy ireo ny mihombo amin'ny alina ary mety hiteraka olana izany raha misy mpifanila vodirindrina aminao. -piaraha-monina dia ilaina amin'ny Aziatika Afovoany, raha tsy hoe mpiambina andian'ondry izy ireo. Mifanaraka amin'ny saka sy biby hafa tsy kaninina ary alika hafa izy ireo, raha mbola tsy loza mitatao amin'ny fiampangana azy ilay alika. Ny CAS dia niaina ny fiainany niaraka tamin'ny fianakavian'i Turkmen ka alika ao amin'ny fianakaviana izay maniry sy mitady fifandraisana amin'ny fiainana andavanandro. Ity mpiambina andiany ity dia tsy natao ho an'ny rehetra. Mila tompona izay mahatakatra ny karazana mpiandry ondry sy ny toetrany miaraka aminy izy ireo. Tsy karazany ho an'ny tompona saro-kenatra na mpandefitra io. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miasa eo ambanin'ny tsipika mpitondra tokana ary voafaritra mazava tsara ary apetraka ny fitsipika. Satria a mifampiresaka ny alika ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Izay no fomba tokana ahafahan'ny fifandraisanao amin'ny alikao hahombiazana tanteraka.
Haavony: Lehilahy 27 - 32 santimetatra (65 - 78 cm) Vehivavy 24 - 27 santimetatra (60 - 69 cm)
Milanja: Lehilahy 121 - 176 pounds (55 - 79 kg) Vavy 88 - 143 pounds (40 - 65 kg)
Mbola lehibe kokoa aza ny lehilahy sasany. TSY misy haavo na lanja farany ambony ho an'ity karazany ity.
Ny CAS dia manana olana amin'ny valahana sy amin'ny kiho izay mitaky fitiliana ireo aretina mifandraika amin'ny génétique izay hita matetika amin'ny karazany lehibe. ihany koa bloat dia olana miaraka amin'ny karazana Mastiff maro, na dia mbola tsy hita tao amin'ny CAS aza izany hatreto.
Ny Ovtcharka any Azia Afovoany dia mitaky tokotany lehibe, lehibe kokoa no tsara kokoa, misy fefy. Manana asa tokony hatao izy ireo (miambina). Ny fipetrahan'ny fiainana kely dia mety hiteraka fahasosorana ary amin'izany ny fihadiana sy ny fitsakoana no ho olana. Na dia amin'ny fampihetseham-batana marobe aza ireo alika ireo dia te-ho eny ivelany mijery ny faritaniny. Tsy maintsy manana tokontany voafefy izy ireo raha tsy izany dia hanitatra ny faritaniny araka izay azony atao izy ireo.
Ny CAS dia mety amin'ny olona mandeha an-tongotra na mihazakazaka. Amin'ny andro dia tsy entina mandeha an-tongotra na jogging izy ireo, mila izany mandeha isan'andro, mandeha lavitra . Mety miseho ho kamo izy ireo rehefa mandry mijery ny fananany, nefa afaka miarina sy mihazakazaka amin'ny segondra segondra.
Terre-Neuve fisaka mifono retriever Mix
Ny Ovtcharka Azia Afovoany dia afaka miaina 12-14 taona any amin'ireo firenena nahaterahany, na izany aza, miaina akaikin'ny 10 taona izy ireo noho ny tsy fahampian'ny fikarakaran'ireo mpitsabo biby sy ny fomba fiainany.
Ny CAS dia tsy mitaky fikarakarana be loatra. Ny tsimparifary sy ny borosy dia tsy miraikitra amin'ny palitao mavesatra sy indroa ary fotaka, rehefa maina, dia miborosy avy hatrany. Ireo alika ireo dia nandatsaka ny palitao betsaka tamin'ny lohataona. Ny palitao dia tokony hosasana fanampiny amin'izao fotoana izao hanesorana ireo volo maty. Ny sisa amin'ny taona dia mpandroaka maivana miaraka amin'ny fikolokoloana palitao mora foana izy ireo.
Ny CAS dia karazany 4000 taona. Tsy dia fantatra loatra ny tena niaviany, saingy maro no mino fa razamben'i Tibetana Mastiff noho ny fomba fiainana mpifindrafindra ny olona manana CAS. Izy ireo dia hita any amin'ny faritra Russia, Iran ary Afghanistan hatrany Siberia. Firenena dimy hafa no mizara ity faritra ity dia Kazakstan, Kirghizastan, Uzbekistan, Tajikistan, ary Turkmenistan. Ity karazana mahaleo tena sy tsy mitokana ity dia niaro ny mpiompy mpifindra monina sy ny ondriny nandritra ny taonjato maro. Ny alika mitovy amin'izany dia mety niaraka tamin'ny Mongol rehefa nanafika an'i Eropa Atsinanana sy Afovoany izy ireo, ary mety ho loharanon'ny mpiandry ondry mpiaro omby any Eropa. Ity karazana ity dia tsy fahita firy any ivelan'ny Repoblikan'i Azia afovoany any Russia fa mitotongana izy io, tsy mahazo sitraka amin'ilay Sheepdog Kaokazy lehibe kokoa. Ny CAS dia manomboka mitombo any Etazonia.
Miasa ampiasaina ho mpiambina andian'ondry sy biby fiompy, mpiambina Estates ary mpiambina manokana.
AKC / FSS = Serivisy tahiry amerikanina Kennel Club Foundation®FANDAHARAM-POTOANA
ARBA = Fikambanana Amerikanina tsy dia fahita firy (asehoy azy ireo any Amerika)
Mountain Top Zero amin'ny maha-alika kely anao eo amin'ny ahitra
Mountain Top Zero the Central Asian Ovtcharka ao anatin'ny 16 volana
Alika kely mpanao ady totohondry afangaro amin'ny pitbull
Gulliver ny alika kely Ovtcharka Azia Afovoany amin'ny 6 volana, milanja 38 kilao (38 kg) - alika kely!
Dagar the Ovtcharka Azia Afovoany amin'ny 15 volana, milanja 173 lbs eo ho eo. (79 kg), sary natolotry ny Petlove Kennels
Dagar the Ovtcharka Azia Afovoany amin'ny 15 volana, milanja 173 lbs eo ho eo. (79 kilao) - 'Zanakalahin'i Uzbash izy, tompon-daka eran-tany 2004, tompondakan'i Eropa 2003, 2005, tompon-daka lefitra Eoropa 2004, ary tompondakan'ny firenena maro.' Sary natolotry ny Petlove Kennels
Deja ilay mpiandry ondry aziatika afovoany mandeha mitsangatsangana
Chara, zaza 3 taona, dia vehivavy somary vavy any Azia Afovoany Ovtcharka. Nahazo Best of Breeds roa tamin'ny seho voalohany nataony! Sary natolotry ny Wild Acres Farm
Oltin toy ny alika kely
Hijery ohatra misimisy momba ny Ovtcharka Azia Afovoany
Azia Afovoany Ovtcharka Sary 1
Ovtcharka avy any Azia afovoany Sary 2
tibetan spaniel lava volo chihuahua mifangaro
rhodesian ridgeback sôkôla laboratoara Mix
boston terrier bulldog afangaro alika kely
inona no itovizako amin'ny trondro volamena
mainty sy fotsy bulldog anglisy